ရမှေနျကိုယျတိုငျ သီဆိုဖို့ ခှငျ့ပွုခဲ့တဲ့ “ဝမျးနညျးတတျတဲ့ ခဈြသူ” သီခငျြးလေးကို Cover Song လေးပွနျဆိုပွီး ပရိတျသတျတှထေံ မြှဝပေေးလာတဲ့ အုပျစိုးခနျ့ – Askstyle
ရမှေနျကိုယျတိုငျ သီဆိုဖို့ ခှငျ့ပွုခဲ့တဲ့ “ဝမျးနညျးတတျတဲ့ ခဈြသူ” သီခငျြးလေးကို Cover Song လေးပွနျဆိုပွီး ပရိတျသတျတှထေံ မြှဝပေေးလာတဲ့ အုပျစိုးခနျ့
ရေမွန်ကိုယ်တိုင် သီဆိုဖို့ ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ “ဝမ်းနည်းတတ်တဲ့ ချစ်သူ” သီချင်းလေးကို Cover Song လေးပြန်ဆိုပြီး ပရိတ်သတ်တွေထံ မျှဝေပေးလာတဲ့ အုပ်စိုးခန့်..
အုပ်စိုးခန့်ကတော့ လူငယ်အကြိုက်အသည်းကွဲသီချင်းလေးတွေကို သီဆိုတတ်သူဖြစ်ပြီး နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲမင်းသားလေးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်နော်. အုပ်စိုးခန့်ကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်လာတာမကြာသေးပေမဲ့ လူကြီးတွေနဲ့ရော လူငယ်တွေနဲ့ပါ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပြေလည်သူဖြစ်တာကြောင့် အများရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို ရရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်။
Idiots အဖွဲ့ရဲ့ပင်တိုင်အဆိုတော် ရေမွန်ကတော့ အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်ပြီး ဆုံးပါးကွယ်လွန်ကာ အားလုံးကိုခွဲခွာသွားခဲ့တာကြောင့် မိသားစုတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေက ယူကြုံးမရဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်..။အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပေမယ့် သူ့ရဲ့သီချင်းတွေနဲ့ အနုပညာတွေကတော့ ပရိသတ်တွေရင်ထဲ ထင်ကျန်ခဲ့ရသလို လူငယ်အဆိုတော်ဖြစ်တဲ့ အုပ်စိုးခန့်ကလည်း Cover Song ပြန်လည်သီဆိုခဲ့ပါတယ်..။
ပရိသတ်အားပေးမှုတွေကကို များစွာရရှိခဲ့ပြီး လူကြိုက်များလွန်းတဲ့ ရေမွန်ရဲ့ “ဝမ်းနည်းတတ်တဲ့ချစ်သူ” သီချင်းလေးကို Cover Song ပြန်လည်သီဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ရေမွန်သီချင်းတွေကို အားပေးလာပြီး အရမ်းကြိုက်လွန်းလို့ Cover ပြန်ဆိုချင်ပေမယ့် Legend ကြီးမို့ ပြန်ဆိုရမှာ ကြောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေအပြင်
နှစ်ယောက်သားစကားပြောခဲ့တဲ့ အမှတ်တရတွေကိုလည်း အုပ်စိုးခန့်က ပြောပြလာပါတယ်..။သီချင်းကို ဆိုဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အပြင် သူ့ကြောင့် သီချင်းပျက်သွားမှာ ကြောက်နေတဲ့ အုပ်စိုးခန့်ကို အားပေးပြီး ဆိုခိုင်းခဲ့တဲ့ အမှတ်တရစကားလေးတွေကလည်း ရေမွန်ရဲ့ စိတ်သဘောထားကောင်းတွေကို အတိုင်းသားမြင်တွေ့ကြရမှာပါနော်..။”ကျနော်ရင်ထဲမှာ ကိုRaymondဆိုတာဘယ်တော့မှမသေဘူး…. I hope you can see this video in heaven အကို
အုပ်စိုးခန့်က Cover Song သီချင်းလေးကို ဝေမျှထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။အကြွေစောလွန်းတဲ့ ရေမွန်ရဲ့သီချင်းကောင်းလေးကို ခံစားချက်တွေအပြည့်နဲ့သီဆိုထားတဲ့ အုပ်စိုးခန့်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်း ပရိသတ်ကြီးလည်း ရေမွန့်ကိုအလွမ်းပြေအဖြစ် အားပေးနှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရင်း တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
ရမှေနျကိုယျတိုငျ သီဆိုဖို့ ခှငျ့ပွုခဲ့တဲ့ “ဝမျးနညျးတတျတဲ့ ခဈြသူ” သီခငျြးလေးကို Cover Song လေးပွနျဆိုပွီး ပရိတျသတျတှထေံ မြှဝပေေးလာတဲ့ အုပျစိုးခနျ့..
အုပျစိုးခနျ့ကတော့ လူငယျအကွိုကျအသညျးကှဲသီခငျြးလေးတှကေို သီဆိုတတျသူဖွဈပွီး နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့ အသညျးစှဲမငျးသားလေးတဈပါးဖွဈပါတယျနျော. အုပျစိုးခနျ့ကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျလာတာမကွာသေးပမေဲ့ လူကွီးတှနေဲ့ရော လူငယျတှနေဲ့ပါ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးပွလေညျသူဖွဈတာကွောငျ့ အမြားရဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကို ရရှိနသေူဖွဈပါတယျ။
Idiots အဖှဲ့ရဲ့ပငျတိုငျအဆိုတျော ရမှေနျကတော့ အစာအိမျသှေးကွောပေါကျပွီး ဆုံးပါးကှယျလှနျကာ အားလုံးကိုခှဲခှာသှားခဲ့တာကွောငျ့ မိသားစုတှနေဲ့ ပရိသတျတှကေ ယူကွုံးမရဖွဈခဲ့ရပါတယျ..။အရညျအခငျြးပွညျ့ဝတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျကို ဆုံးရှုံးလိုကျရပမေယျ့ သူ့ရဲ့သီခငျြးတှနေဲ့ အနုပညာတှကေတော့ ပရိသတျတှရေငျထဲ ထငျကနျြခဲ့ရသလို လူငယျအဆိုတျောဖွဈတဲ့ အုပျစိုးခနျ့ကလညျး Cover Song ပွနျလညျသီဆိုခဲ့ပါတယျ..။
ပရိသတျအားပေးမှုတှကေကို မြားစှာရရှိခဲ့ပွီး လူကွိုကျမြားလှနျးတဲ့ ရမှေနျရဲ့ “ဝမျးနညျးတတျတဲ့ခဈြသူ” သီခငျြးလေးကို Cover Song ပွနျလညျသီဆိုထားတာ ဖွဈပါတယျ..။ ငယျငယျလေးကတညျးက ရမှေနျသီခငျြးတှကေို အားပေးလာပွီး အရမျးကွိုကျလှနျးလို့ Cover ပွနျဆိုခငျြပမေယျ့ Legend ကွီးမို့ ပွနျဆိုရမှာ ကွောကျခဲ့တဲ့အကွောငျးတှအေပွငျ
နှဈယောကျသားစကားပွောခဲ့တဲ့ အမှတျတရတှကေိုလညျး အုပျစိုးခနျ့က ပွောပွလာပါတယျ..။သီခငျြးကို ဆိုဖို့ခှငျ့ပွုခဲ့တဲ့အပွငျ သူ့ကွောငျ့ သီခငျြးပကျြသှားမှာ ကွောကျနတေဲ့ အုပျစိုးခနျ့ကို အားပေးပွီး ဆိုခိုငျးခဲ့တဲ့ အမှတျတရစကားလေးတှကေလညျး ရမှေနျရဲ့ စိတျသဘောထားကောငျးတှကေို အတိုငျးသားမွငျတှကွေ့ရမှာပါနျော..။”ကနြျောရငျထဲမှာ ကိုRaymondဆိုတာဘယျတော့မှမသဘေူး…. I hope you can see this video in heaven အကို
အုပျစိုးခနျ့က Cover Song သီခငျြးလေးကို ဝမြှေထားတာ ဖွဈပါတယျ..။အကွှစေောလှနျးတဲ့ ရမှေနျရဲ့သီခငျြးကောငျးလေးကို ခံစားခကျြတှအေပွညျ့နဲ့သီဆိုထားတဲ့ အုပျစိုးခနျ့ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကိုလညျး ပရိသတျကွီးလညျး ရမှေနျ့ကိုအလှမျးပွအေဖွဈ အားပေးနှဈသကျကွလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ရငျး တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော..။